Ufisa baqhubeke bayoncela ulwazi emawodini - Ilanga News
Home Izindaba Ufisa baqhubeke bayoncela ulwazi emawodini
Ufisa baqhubeke bayoncela ulwazi emawodini
Owenza unyaka wokugcina wobudokotela ubalisa ngokumisa kwabo
UMNU Lindo Ntshangase owenza unyaka wokugcina ezifundweni zobudokotela, ubalisa ngokusala ezifundweni zabo ezidinga babhekane ngqo neziguli emawodini ezibhedlela.
BAFE olwembiza abenza unyaka wokugcina ezifundweni zobudokotela njengoba kubhilite i-coronavirus emhlabeni, okwenze kwavalwa thaqa izinto emazweni ehlukene.
Phela unyaka wokugcina nxa ufundela ubudokotela wenzelwa esibhedlela.
Phakathi kodokotela bakusasa ababalisayo ngesimo ababhekene naso, kukhona uMnu Lindo Ntshangase, ozalwa eNcotshane, oPhongolo. Wenza unyaka wokugcina ezifundweni zobudokotela e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), kanti ubeqoqa ulwazi esibhedlela saseMlazi, iPrince Mshiyeni.
Uthi ukuvalwa kwezwe kuphoqe ukuba abuyele kubo. “Njengabafundi bonyaka woku-gcina sisebenzela ezibhedlela kakhulu cishe unyaka wonke okuyilapho esisuke siqoqa khona ulwazi.
“Unyaka uqala kuvele sekuno-msebenzi omningi okwenza sisheshe siqale, kanti nasekuphe-leni kwawo, sisonga usugoqwa ngempela (unyaka).
“Siyaqonda ukuthi njengoba simisiwe nje, yingoba umnyango wezempilo nenyuvesi bazama ukuqikelela ukuphepha kwethu, kodwa kuyasilimaza ukumiswa kwayo yonke into,” kusho yena.
Uthi uyakuqonda ukuthi kakusibona bodwa abaphazamisekile kodwa uma kuqhubeka isikhathi kuvalwe izwe ngenxa yalesi sifo, bacela ukuba okungenani bavunyelwe ukusebenza ezibhedlela ezingekho engcupheni (low risk).
“Nginethemba lokuthi kulezi zinsuku eziwu-21 ukhona umehluko ozobakhona njengoba inhloso kuwukunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus futhi nginxusa bonke abantu bakuleli ukuba bayilandele imiyalelo kahulumeni.
“Yize kunjalo ngeke sifihle ukuba ikhalenda lesikole liphazamisekile kakhulu, ikakhulukazi kithina bafundi bonyaka wokugcina ebudokoteleni.
“Phela imfundo nolwazi oluni-ngi sikuthola ngokuba seduze kweziguli, kwazise ulwazi esisuke siludinga, kalukho ezincwadini kepha luseceleni kweziguli uqobo,” kusho uMnu Ntshangase.
Uthi kusukela ekhula ubenothando lobudokotela, kodwa lolo thando lukhuliswe wukuthi ngabazali bakhe abebemdlalisa ngokuthi bafisa abe ngudokotela.
“Ngikhulele ekhaya elingaswe-le, umama ubenguthisha nobaba esebenza,” esho. Uthi esesemabangeni aphakeme emfundo ubephasa kahle okwenze kwalula ukwe-nza ubudokotela esephothule u-matric.
“Ngisebenza ngokuzikhandla uma kukhona engikwenzayo. Kwa-matric ngathola o-distinction abawu-6 no-B oyedwa. Namanje ngisaqinisekisa ukuthi ngisebenza ngokuzimisela,” kusho yena.
Ukudlula emhlabeni kukayise ngo-2014, kumgqugquzele nakakhulu ekubeni azimisele kulo mkhakha kwazise ushone emuva kokugula isikhathi eside.
Njengoba kumisiwe nje ukufunda, uMnu Ntshangase uthi ukubo lapho emangazwa wukubona abanye abantu beziqhubekela nempilo nje sengathi kakonakele lutho. Nokho kumnika ithemba ukuthi bakhona abayilandelayo imigomo ebekwe wuhulumeni.
Unethemba lokuthi ngemuva komhla ka-16 kwephezulu, impilo izobuyela esimeni, bakwazi ukuyoqhubeka basebenze ezibhedlela. Uthi okubanika ithemba wukuthi inyuvesi ibatshele ukuthi izama zonke izindlela ukuthi
kungaphazamiseki ukufunda nokuqhamuka namaqhinga okuthi kungenzeka kanjani ukuba abafundi baqhubeke nokuthola ulwazi yize izwe livaliwe.
“Njengamanje kasazi noma siqhubeke nokuhlala emakhaya siphephile kumbe sibhukule siye ezibhedlela siyolekelela khona ngoba siyazi ukuthi siyadingeka,” kusho yena ngokukhathazeka.
Previous articleUNkulunkulu ulindele sidumise singaphezi
Next articleIngwadla kwabamnyama ngabazobulawa yi-COVID-19